Shilalekha » बजारमा १५ कम्पनीको आईपीओ आउँदै, कुनको कति ? बजारमा १५ कम्पनीको आईपीओ आउँदै, कुनको कति ? – Shilalekha
बजारमा १५ कम्पनीको आईपीओ आउँदै, कुनको कति ?
५ चैत्र २०७७, बिहीबार १७:५७
काठमाडौं । आईपीओमा लगानीकर्ताको आकर्षण दिन प्रतिदिन बढ्दो छ । पछिल्ला समयमा निष्कासन भएका आईपीओमा लाखौँको संख्यामा आवेदक थपिने गरेका छन् ।
आईपीओमा नगण्य जोखिम तथा छोटो समयमै पनि मनग्य नाफा देखेरै लगानीकर्ता आकर्षित भएका हुन् । पहिले पहिले विशेषगरी लघुवित्त र बिमा कम्पनीमा बढी आकर्षण हुने गरेकोमा अहिले नेप्से परिसूचक बढेर करिब एक वर्षको अन्तरालमै दोब्बर पुगेसँगै सबै कम्पनीका आइपिओमा पूर्तिभन्दा कैयौँ गुना बढी आवेदन पर्ने गरेको छ ।
शेयरबजारमा निफ्राको शेयरलाई टर्नीङ प्वाइन्ट रुपमा लिने गरेको पाइन्छ । निफ्राको ठूलो संख्याको आइपिओले गाउँ–गाउँसम्म सेयरप्रतिको जागरण पुर्‍याउन थप भूमिका खेल्यो ।
अहिले जुनसुकै कम्पनीका केही लाख कित्ता सेयर निष्कासन गरिँदा पनि १० लाखभन्दा बढीको आवेदन पर्ने गरेको छ । यसले सेयरबजारमा, विशेषगरी प्राथमिक बजारमा नयाँ लगानीकर्ताको आकर्षण र प्रवेश तीव्र गतिमा बढ्दै गएको देखाउँछ ।
चैत ६ गते शुक्रबारदेखि लगानीकर्ताले सिंगटी हाइड्रो कम्पनीको शेयर भर्न पाउने भएका छन् । कम्पनीले सर्वसाधारणको लागि २६ करोड ९७ लाख रुपैयाँ बराबरको २६ लाख ९७ हजार कित्ता शेयर निष्काशन गर्नेछ ।
यी १५ कम्पनी आईपीओ निष्कासन गर्दै
११ हाइड्रोपावर र डिस मेडिया नेटवर्कको गरी १५ कम्पनीको आइपिओ अनुमतिको पर्खाइमा रहेका छन् । निकट भविष्यमै प्राथमिक बजारमा १५ कम्पनीका करिब ५ करोड ५६ लाख कित्ता आइपिओ निष्कासन हुँदै छ । यसमध्ये सर्वसाधारणको प्रमुख रोजाइमा पर्ने गरेका लघुवित्त कम्पनी २ वटा छन् ।
त्यस्तै, बलेफी हाइड्रोपावरले पनि प्रभावित क्षेत्रका बासिन्दा र सर्वसाधारणका लागि ३६ करोड ५५ लाख रुपैयाँको प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि निवेदन दिएको हो । ग्रिन भेन्चरले ६२ करोड ५० लाख रुपैयाँको प्राथमिक शेयर निष्काशनका लागि बोर्डमा निवेदन दिएको हो ।
बलेफीको ग्लोबल आइएमई र ग्रिन भेन्चरको लक्ष्मी क्यापिटल मार्केट रहेको छ ।